Waad salaaman tahay, waxaan ahay Mac. Aniguna waxaan ahay PC. | Martech Zone
Waad salaaman tahay, waxaan ahay Mac. Aniguna waxaan ahay PC.
Isniin, February 5, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waad salaaman tahay, waxaan ahay Mac.
Aniguna waxaan ahay PC.
PC: Waxaan hayaa RAM, Motherboard, Processor, Mouse, Keyboard, drive adag iyo Monitor.
Mac: Aniguba waan sameeyaa. Maaddaama dhammaantood ay wada sameeyeen dad isku mid ah oo sameeya Nidaamkayga Howlgalka, si fiican ayey u shaqeeyaan. Waa lambar aad u yar oo la maareeyo.
PC: waan arkaa. Waan ka qaalisan ahay tan iyo markii aad isku dari kartid oo aad isku dhejin kartid kumanaan ikhtiyaarro ah oo xitaa aad adigu dhisato Waxaa laga yaabaa inaan sidaada oo kale u shaqeyn, laakiin waxaan taageeraa malaayiin aalado kale. Nasiib darrose, markii qof qoro wax aan macno lahayn, ayaa laga yaabaa inuu igu wareero.
Mac: Macno buu sameynayaa, taasi waa sababta aynaan u oggolaan dadka kale inay alaabteenna sameeyaan. Waxaan rajeynayaa inaad taas ka shaqeyn doontid. Haye, uguyaraan waan wada hadli karnaa!
PC: Hubaal waad kari kartaa! Waad iga arki kartaa shabakadaada, waxaan ku arki karaa adiga. Labadeenaba waxaan taageernaa Wireless, Bluetooth, Firewire iyo USB.
Mac: Mararka qaarkood waxaan u labbisto wax yar ka qabow sidaad u qabatid, in kastoo.
Kumbuyuutarka: Haa, laakiin haddii dadka waaweyni ay diyaar u yihiin inay wax yar ku qaataan, si fiican ayaan u muuqan karaa. Heck, xitaa waxaan kuugu ekaan karaa adiga oo wata kombiyuutar duluc wanaagsan.
Mac: Wow. Oo tan iyo markii aan haysanno isla processor-yada hadda, runtii waan ku shaqeyn karaa barnaamijkaaga isbarbar.
PC: Waad awoodaa Taasi waxay umuuqataa wax yar oo hal dhinac ah, miyaanay ahayn?
Mac: Waa hubaal no laakiin cidina runtii kama cabaneyso sababta oo ah waxaad ka mid tahay kuwaas bahallada 'ganacsiga' ah ee innaga oo dhan innaga qabow loo malaynayo inay neceb yihiin.
PC: Naceyb, saaxiib! Habkaas ogow in qofku runtii daryeelayo sida adiga (Apple) aad ula socoto $ 472 milyan oo macaash ah oo leh faaiido dhan 48%. Waa wax lala yaabo in ay shar iga dhigeyso la shaqeynta qof walba, halka aadan waxba la wadaagin oo aad macaash badan hesho, sidoo kale.
Mac: Shhhhh. Cidna ha u sheegin. Si kastaba ha noqotee, waxaan la soo baxeynaa taleefan dhowaan oo noqon doona iibiyaha weyn.
PC: Taleefan? Wow those miyaanay kuwani soo bixin wax yar ka hor?
Mac: Haa, laakiin waxaan ka dhigeynaa mid qabow.
PC: Immisa qaboojiye?
Mac: 50% -wax-faa iido-yar-qaboojiye.
PC: Wow. Noocyada noocaas ah, waxaad u maleyneysaa inaad hoos u dhigi karto qiimahaaga waxyar. Dhamaantiin, fanaaniinta iyo muusikiisteyaasha ma helaan lacag aad u badan… miyay sameeyaan?
Mac: Maya, laakiin waxay diyaar u yihiin inay waxbadan ku bixiyaan hal abuur, waxyaabo qabow.
PC: Way fiicantahay inaad ahaato qabow.
Mac: Dhamaan jidka bangiga, saaxiib!
FIIRO GAAR AH: Qoran oo laga soo dhejiyay MacBookPro
Colts: Superbowl Champs! Shaqo-dhise: Khasaarayaal!
Febraayo 6, 2007 saacadu markay tahay 5: 58 AM
Qoraal cajiib ah Doug !! Waad si kooban u soo koobtay dhammaan doodaha PC-Mac iyo iPhone oo leh hal qoraal gaaban oo madadaalo leh. Wanaagsan!
Febraayo 6, 2007 saacadu markay tahay 10: 21 AM
Febraayo 6, 2007 saacadu markay tahay 10: 48 AM
Ex-unug-ent! Waad ogtahay, Justin Long wuxuu ka socdaa xayeysiiska Mac. Qiyaas inuu weydiistay lacag aad u badan.
Feb 6, 2007 markay ahayd 1:12 PM
Waxaad ka heli doontaa inay taasi ahayd xanta uun. Wuu ku dhegan yahay xayeysiisyadaas in muddo ah. Xayeysiisyadu waxay u shaqeynayaan si fantastik ah - waxaan ka shakisanahay inuu ka adkaan karo Mac kuwaas.
Feb 6, 2007 markay ahayd 4:30 PM
hanti-goosadka beenta ah weligood sidan wanaag ma dareemin!
Feb 6, 2007 markay ahayd 4:39 PM
Waa runtaa, Gavin. Kumaan galin siyaasada tan laakiin waxay ixasuusineysaa dowladnimada as ilaa iyo inta Jamhuuriyiinta iyo Dimuqraadiyiintu qof walba is neceb yahay, qofna ma ogaanayo inta ay ku xad gudbayaan iyo inay jeebkooda buuxinayaan.
Feb 6, 2007 markay ahayd 11:07 PM
Waan jeclahay kaftankan! Dabcan, Apple waa kan qoslaya. Dhanka kale, Dell wuxuu dib uhelay maamulihiisii ​​guud. Waxaa laga yaabaa inuu dib u shaqaaleysiin doono Dell Dude ganacsigooda si loola dagaallamo wiilka Mac!
Febraayo 9, 2007 saacadu markay tahay 9: 53 AM
Waan jeclahay Mac waa ii toy. Waxaan ku saxaa fiidiyaha kumbuyuutarkayga oo si fiican ayey u shaqaysaa. In kasta oo aan laxanku yahay tufaax haddana si weyn ayuu ugu shaqeeyaa kombuyutarkayga. Ku soco iibsiga ugufiican waxayna leeyihiin kumanaan cinwaano kumbuyuutar ah oo kombuyuutarka ah iyo waxoogaa yar oo ah MAC. Waan ka xumahay inaysan Macs xirmin waa BS waan arkay iyagoo sameynaya.
Jun 2, 2007 at 12: 41 PM
Waan jeclahay soo gelintan 😆 Waa wada jir hada 😛 Laakiin dhab ahaantii Mac wuxuu aaday shaashad-buluug-shaashad sidoo kale, kaliya waxay dhacdaa wax ka yar Windows, Windows XP waxay ila ahayd shirkad wanaagsan inkasta oo. In kastoo aan ahay isticmaale cusub oo Mac ah, laakiin waxaan u maleynayaa haddii aan fursad u heli lahaa inaan doorto kumbuyuutarkeyga xiga, waxay noqon doontaa heshiis aad u adag…
Jun 20, 2007 at 12: 27 PM
Waxaan u maleynayaa waxa wanaagsan ee ku saabsan xayeysiiska Mac inuu yahay inay fududahay in lagu maadsado. Waan hubaa in Apple ogaatay inay yihiin xayeysiis cusub aysan aheyn kuwa ugu weyn, laakiin jilitaannadan - kuwa wanaagsan ama xun - waxay kaliya ku soo kordhin doonaan fiiro gaar ah xerada Apple.